murti iyo macaankeeda - News - Wararka - Somali Forum - Somalia Online
By Basbaas, September 2, 2003 in News - Wararka
1)-Maxaa ka haysaa Gabay, Maahmaah, Sarbeeb, Buraanbur, Cayaaraha (sida dhaanto, saar, qoobka cayaarka)?.
2)--Adiguse mid ma samayn (alifi) kartaa?
3)---Dhibka Somalida ku dhacay, mid qoys ama rag iyo dumar, dhaqaale, qaxid, dhibaato kale ama wax xiiso leh gabay ama maahmaah ma maqashay, adiguse maka samayn kartaa?.
**##Tusaale; naag qurbe lagu furay foodley noqotay, ama naag la furay haa, nin la furay ma maqasheen!
if u don't speak/write/read Somali, can u create ur own poem in English?.
Originally Posted by Basbaas:
sxb aniga mar mar aan soo gaaraa meeshan, balse taas (oraahda kor aad ku xustay) aarmey la micne tahay Maahmaahdi ahayd: "Naag la Furay fadhi uma-yaal"
Anniga qaas ahaan haddii aan yar tix-raaco Oraahda aad kor ku xustay, I may add the following Jajab, which is somewhat true, and it goes like this:
Raggii (Somalidii) hore Dumarka Saddex nooc ayay u kala qaadi jireen; saddexdaas nooc oo kala ah:
:Kuu toosa; Kula toosa; iyo Kaaddi la toosa!!! :eek:
...........Ok........Ka sii guddib.....
Tan-Qurbaha taala....waxaa laga Yiri....
Saddexdaa sifaalo ee kor ku xusan 2-dan dambe ayaa ayaa Qurbaha lagu sii jeexjeexay waxayna noqotay sidan:
Ii dhiib aan kuu dheelee, Ha I-dhugan aan dhaqaaqee; iyo Iga dhal aan kugu dhibbee!!!
....Ma I fahantay sxb Basbaasoow.....
Aqyaarta kale raali iga ahaadda haddii aan tibaaxay wax dhib idinku noqon karo, laakiin I'm just to tell you what I've heard or learned from our Sooyaal, which, perhaps,you may have forgottennn, that is all......In that case, waxba yaanay xinnif iddinku reebin taasi..
Nin ayaa wuxuu ka jawaabi jiray su'aal kasta oo la waydiiyo, cajiib bulshooy,
maalin baa nin ku yiri; waxaan u rabaa in aan ogaado 3da arimood:
1) goorta aan dhimanayo
2) in lacag/maal helayo in inkale
3) jano iyo naar kee gali doonaa
wuxuu ugu jawaabay
1) dadka kula da'da ah hadii aragtid ayaga oo yaraanayo oo midba mar dhimanayo, adiguna maxaad sugin, waqtigaagii waa soo galay.
2) hadii aad dad leedahay lacag/xoolo waad helin.
3) adiga oo iska socda hadii ku soo baxdid dad meel ku sheekaysanayo; hadii ay dhahaan inkaar qabihii baa soo socdee nooga qariya naarta baad galin, hadiise ay yiraahdaan khayr qabihii baa soo socdee ha ina kala saaro, ama noogu sheega arinta janada ayaad gali doontaa.
Aduunyada qof joogoow maxaa aragti kuu laaban!
Nin baa intuu xerada Daraawiishta ee Sayid Mohamed Abdule Hassan ku yiri: [sayidii gabay aa i haya]. hahahahahaha
waa aduunyo ninba dhan u rarayo
waa cajiib cajiib ninba ceesaan tii ceel gee
bal ana tan iga qora
#1 waqooyi waxaan kusoo arkay adhi qaad cuna
#2 koonfur nin afartan jira oo leh ciyaal xafaan ahay noo
#3 kenya police qaxooti ku yiri ama beer iqaad
ama waan ku xiri
#4 ethoipia dad habeenkii musqusha kabaqa oo tuuji hotelka iyo gurigaba u yaal
#5 canada ama west umad aan 18 jir waligeed dhaafayn ( wiil iyo gabar)
u guys u cracked me up fo'sho
afsomalgiina qatar cadiim waaaye
adeerkeey inaa inii balimiyo waaye halmaalin
lol Mahdi ...afsomaligaada.. is off the hook
#5 canada ama west umad aan 18 jir waligeed dhaafayn ( wiil iyo gabar) [/QB]
gabar iyo hooyadeed isku cimri sheeganayaan qurbo aan ku arakay
Nin baa ninkale intuu aad ugu fiirsaday, markii uu layaabay gowsihiisa mirirka ku yaal, iyo sida jaadka, ama waxkasta u baduugayaan buu ku yiri,
Garaadow ma tihid nin gobba, oo gabar la siiyaaye
Ganaca iyo calooshaad cuntaa gowso habareedle.
balse ninba ceesaantii ceel geeye, aniga caawa tuu aduunka aa i haysata, hurdo kale tagnay oo waa markii aan buuga iyo qalinka sariirta la dul tagi jiray si aan bal maskaxda u maroojiyo, bal in wax ka soo dhiiqaan baa la arkaaye.
Tixda goortaan tiriyey toose niman jiifay
midaana aniga la iigama horayn:
murti, maad iyo mashxarad maansooy adigaa leh
marqaan, maskax falan miiroow adigaa leh
malab, mahadha jacayl maryamo adigaa leh
marka taariikhda dib loo baaro, Qaadka markiisii horeba waxaa heshay ri ama neef ari ah.
marka haatan haday cunaan dhibaato badan ma laha, ee layaab leh ninka kaga dayday ri'da cuntadeeda.
...afartan jirka waaba marka ninka raga ah xoogiisa iyo caqligiisu isku fariisto...marka sidaa uma da'a wayna.
..mida qurbaha qofka marka 18 iyo wax udhow uu ku soo galay walina somalidu sidii u dowlad la'dahay taas baa dhibka keentay.
guuleedyare,man u cracked me,walaahi u r funny,kan koonfurta ciyaal xaafad aan ahay nooh,kaas aaba oogu daranbna,
waqooyiga micna maba lahannba oo ceesaanta qaadka cuneeso waa iska caadi anaaba soo arkay ayagoo kooxa kooxa u fadhiya oo taqsiinta dheereestay,kaaga daranka qaadka kan oogu daran ay cunayeen,midka la yiraahdo daba musbaar,kuwa kale oo suqaar makhaayad ka cunaaya xattaa waa arkay,noo dhiib dee